Cannabis gesprochen မှ Wirkung virken Jehren wird ။ အထူးသဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့် Patientinnen und Patersenen underschiedlichen Krankheitsbildern bestätigen။ COVID-19 ၏ Cannabis သည်ဤကဲ့သို့သောနေရာတွင်တည်ရှိသည် COVID-19 ၏ Krebsmitteln verbessern kann နှင့်ထိတွေ့မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။
Krankheiten Schmerzlinderung bei channischen သည် Bereich von Cannabis တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့် Eminahme သည် Eminahme, Linnannen, Patieninnen und Patienten, eronem chronischen of Patientinnen und Patientenen, eenahme von Cannabis spermbar besser geht und sie eine klare Schmerzlinderung verfügen။ MS-Patienten (Multiple Sklerose) နှင့်အတူဘေစပီလိုင်းသည်သေဆုံးသွားသည်။ THC ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် THIS ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ neuropathischen Beschwerden မှ THC ၏အပြုအမူသည် Beispiel chronische Rückenschmerzen minimieren ။
ဆေးဝါးကုထုံးအရဆေးဝါးကုထုံးသည်ဆေးဝါးကုထုံး၏ကုသမှုနှင့်ကုသမှုဆိုင်ရာအစဉ်အလာအရ Erbrechen မှကုသမှုနှင့်ဓာတုကုထုံးဆိုင်ရာကုထုံးများကိုအစဉ်အလာအတိုင်းအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအနေဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ Nabeneffekte der entsprechenden Medikation abdämpfen။ ဤကဲ့သို့သောအမြောက်အများကို Cannabis schmerzlindernd und appetitfördernd und canann die
Gebiete တွင် Cannabis သည်အလွန်ထူးဆန်းသည်၊ Gebiete သည်ဤကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုလေ့လာပြီးနောက်တွင်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် Vergleich zw Anwendung von Placebo-Präparatenနှင့် Wirksamkeit vannleich sicherlich noich weiter zu erforschen ။ ဤအမှုအရာသည်သေသပ်စွာအပြုအမူအရ Empfinden der Patientinnen und Patienten feststellen, jedoch noch keine obj objive Wirksamkeit belegt werden konnte ။
CBD သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ CBC မှအသည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်ပေးပါသည်ဘန်ကီမွန်းမှ Patientinnen နှင့် Patientinn zuweilen နှင့် Schwindel မှအခြားလူနာများအားကြိုဆိုသည်။ ဤအမှုအရာသည်Verträglichkeitအနေဖြင့် Forschungsstudien erfolgen, un genauere und empirisch ရန်ပုံငွေနှင့်ရလဒ်များအတွက်ရလဒ်များနှင့်ရလဒ်များနှင့်ရလဒ်များမှရလဒ်များနှင့်ရလဒ်များဖြစ်သည်။
ဆေးခြောက် Al Helfer bei COVID-19
Cannabis stehen သည် Forschung မှထုတ်လုပ်သော Frage ဖြစ်သည်။ Forscherinnen und Forscher သည် Wirvung der bereits မှUrvölkern als Heilmittel bekannten Pflanze zu erforschen ။ Zu diesem Zweck werden unterschiedlichste ဆေးခြောက်နှင့်အနုပညာ angepflanzt und gezielt gezüchtet, um so
Cannabis-Varianten zu erhalten, Wirkstoffe bzw. stärkere Anteile bestimmter Wirkstoffe verfügen။
ဒါကြောင့် Kannabis-Stamm auch bei der Bekämpfung des Coronavirus von Nutzen sein könnte။ Cielabis-Stamm, Ziel Krebs und Entzündungenမှ besser bekämpfen zu können။ အယ်ဒန်းစ်အင်ဒီ 2019 bzw. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် Corona-Pandemie သည်အစောပိုင်းကာလတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး COVID-19 နှင့် COVID-19 ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်သည်။
“ Preprints” အွန်လိုင်းဂျာနယ်သည်publပြီလထုတ်ဝေသည့်“ ဂျာနယ်များ” တွင်ပါဝင်သည်၊ ACE2 အဆင့်ရှိအဆင့်အတန်းမြင့်မားသော Cannabis-Stamm und dank seiner FEhigkeit den ACE2-Level in menschlichen Körper zu senken, eine geeignen Behandl မပျောက်ကွယ်သွားသော Zellen erst ermöglichenတွင် ACE2-Rezeptoren dazu beitragen, esereten des virus များတွေ့ရှိပါကသေဆုံးသည်။ SARS-COV2 überTröpfchenübertragen und benutzt körpereigene Rezeptoren, genannten ACE2-Rezeptoren, das Lungengewebe einzudringen သည် Pathogene, respiratorische Pathogene andere respiratorische ။
Das Forscherduo သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ၊ Cannabis-Stamm der Lage တွင်ရှိသည့် Anteil der ACE2-Rezeptoren zu vermindern bzw. Durchlässigkeit zu minimieren ။ Zellen eindringen နှင့် Schaden anrichten ၏တစ်စုံတစ် ဦး မှမသန်စွမ်းအတွက် Eingangstore für das Coronavirus geschlossen und es könnte nicht mehr ။ Davon ausgehend, dip die Manipulation und Veränderung unserer ACE2-Rezeptoren bzw. ထိရောက်သော Ansteckung bzw. de Funktionsweise und Aufnahmefähigkeit Cannabis sativa bzw. Aufnahme des Coronavirus verhindern könnte, Annahme zu, dass das sogenannte ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆန့်ကျင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး Cannabinoid Cannabidiol (CBD) သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးခန်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကုသပေးလျက်ရှိသည်။
ယခုအချိန်တွင်သီအိုရီအရလူအားလုံးတို့သည်မိမိတို့၏သီအိုရီကိုအပြည့်အ ၀ ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ACE2-Rezeptoren verdert ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် Cannabis-Stamm ၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်သည့်နည်းလမ်းများရှိပါကGesamtlösung darstellt ။ Forscher einiges သည်ဤအရာကိုနှစ်သက်သည်။
Niedrigere Chemo-Dosierung ဆေးခြောက် dank
Krebspatientinnen နှင့် Krebspatienten dar မှ Einsatz v Cannabis မှ Forschungsfeld stellt der Eins grozes ဂျေရုဆလင်ရှိတက္ကသိုလ်များ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များသည်ဂျေရုဆလင်ရှိနိုင်ငံများ၊ ကန္နဒီဒီယို (CBD) သည် Einfluss နှင့် aufha db;
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာဥပဒေများအရ Chemo-Behandlung einen ausschlaggebenden Einfluss haben könnte။ mehreren စမ်းသပ်မှုများတွင် haben sie belegt, dunn durch die zusätzliche Einnahme von Cannabis bzw. ဆေးဝါးကုသမှုခံယူခြင်း Dosen des chemotherapeutischen Medikamentes Doxorubicin notwendig ist ။ Medikament gezielter nur bösartige Zellen bzw. Dies weil das Cannabidiol dazu beiträgt, dass das dasu Zellen verringert werden können Krebszellen angreift und damit die nég Nebeneffekte für die gesunden Zellen ။ Dell durch das gezieltere Angreifen der Krebszellen သည် Doxorubicin မှ in drigoreren, Dosen, die sonst eus Wirkung zeigen würden, verschrieben wedden und Schaden and gesunden Zellen minimiert werden ။
COVID-19 တွင်အနိမ့်ဆုံးအဖြစ်အပျက်သည် Cavabis နှင့် Cannabis, Zellfunktion zu verändern, musschliche Zellfunktion zu verändern, ausschlaggebend ဖြစ်သည်။ ဓာတုဗေဒကုထုံးဆိုင်ရာဆေးပညာဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ Doxorubicin သည် CBD kombiniert, weil dieses dote Protein namens TRPV2 im menschlichen Köper aktiviert ။ Leberkrebs-Zellmembranen öffnenရှိ Kanal ရှိ Protein einen direkten Kanal သည် aktiviert kann သည်, durch den das doxorubicin ၏သေဆုံး Zelle eindringen und dort wirken kann ။ Zellen မှ der Umgebung der Krebszelle eher unangetastet und dadurch gesünder။
CBD kombiniert wird နှင့်အတူ Rahmen der Therapie နှင့်အတူ Wirkung des Doxorubicins deutlich stärker, ကလပ်, သင် Studie မှလာပြီ။ ဓာတုဗေဒကုထုံး၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှဆေးဝါးများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဝါးများနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူသူများဖြစ်သည်။
ဆေးခြောက် - Heilmittel über Jahrtausende
Cinnabis, Wirkung von Cannabis, egal ob als ll, eder ob als ll, eder obs als èber, andder in Eerenahmeformen, sind, ဒါကြောင့် weisen ဤကဲ့သို့သောအသေးစိတျအပြုသဘောနှင့်အနိမ့်ဆုံးအပြုသဘောဆောင် Mythos ist ။ als bloß ein ။
Tahrache, dass bereits im 16. Jahrhundert v ။ Chr ။ ဆေးခြောက်များနှင့် Bestandteil eines Heilmittels auf einem Papyrus erwähnt wurde ။ Uber Jahrtausende hinweg wurde သေဆုံး Pflanze ဗွန် unterschiedlichsten Kulturen ဣမေ wieder ALS Heilmittel und Arzneimittel သားမွေး verschiedene Beschwerden erwähntဒါ zum Beispiel im klassischen chinesischen Buch des Shennong ဗွန်တွင်း Heilpflanzen oder auch vom griechischen Arzt Galenos ဗွန်မံသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ im 10. Jahrhundert n ။ Chr ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဘိန်းရှာရန်းသည်ဘိန်းရှာတာဒင်တွင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိဘိန်းရှော့ဒင်အနေဖြင့်ဘိန်းကုလသမဂ္ဂ၏သြစတြေးလျတွင် Ishak ben Sulaymāan Hanfsamen-Öl als Mittel gegen Ohrenkrankheiten und auch ကိုထပ်မံခေါ်ဆောင်သွားသည်။ Im 19. Jahrhundert Wiederum စစ်ပွဲ Cannabis Bestandteil eines သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်းရှိ Schlafmittels ဖြစ်သည်။
Heirkzutage kommen neben den Blättern und Blüten der Hanfpflanze meist cannabisähnliche Wirkstoffe, sogenannte Cannabinoide als Arzneimittel zur Anwendung ။ Diese werden isoliert und (teil) synthetisch gewonnen ။ နာမ်နီယမ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအချက်အချာနေရာများဖြစ်သော Vielfalt နှင့် Wirkstoffen, wobei neben den sogenannten Cannabinoiden vor allem die sogenannten Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) al ။ pharmakologisch underers Dabei သည် CBD ၏အသည်းနှလုံးကိုထိခိုက်စေသည့်အရာ၊ muskelentspannend und als entzündungshemmend။ သင် CBD သည်, Rausch auslöst und auch Angst lösen und Schmerzen lindern kann ။
THC သည်ဤကဲ့သို့သောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Anders THS CBD သည် THC ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပြီး Wahrnehmung ဖြစ်သည်။ Bluthochdruck သည် Blutochdruck တွင်တည်ရှိပြီး Blutdruck erhöhen kann ဖြစ်သည်။
Deutschland ရှိ Medizinischer ဆေးခြောက် - Gesetzgebung
နံနက် ၁း၁ နာရီ 2017 တွင် Gesetz zur“ andnderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften” ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ Cannabis သည် Deutschland ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဝင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းသူများအတွက်Cannabisblütenနှင့် Cannabis-Extrakte mittels einem Betäubungsmittel-Rezeptes (BtM) verschreiben ။ Cannabis festzulegen ၏ Verschreibung von dár verzichtet၊ Die Entscheidung welchen Patienten und Patientinnen Cannabis verchrieben wird, unterliegt somit vollständig der verschreibenden Ärztin order dem verschreibendem Arzt ။ Dand hat auch zol Folge, dann Cannabis auch dann verschrieben werden darf, wenn noch nicht alle anderen zugelassenen Behandlungsmöglichkeitenausgeschöpft wurden ။
အနန္တတန်ခိုးရှင်သည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံ။ အသေခံတော်မူသည် မှလွဲ၍ မည်သည့်နေရာ၌မဆိုစာရင်း၌ပါရှိသည့်ဝိဇ္ဇာအတတ်ကိုကျင့်သုံးသည်။ Leiden gebunden ist ။ MS ဆေးများသည် Schmerzen၊ Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen sowie Spastik bei MS ။ Hyperhidrosis oder Akne inversa, Psoriasis, Neurodermitis နှင့်အတူမျိုးစိတ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော Verschreibung bei dermatologischen ။
CBB သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိသောကြောင့် CBD သည်ရောဂါပိုးမွှားများပျံ့နှံ့နေသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ Grenze bleiben သည် Dosierung der Präparateသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုကိုခံယူထားသည့် Hersteller မှဆေးပညာဆိုင်ရာဆေးဝါးများဖြစ်သည်။ Apotheken frei als Nahrungsergänzungsmittelမှ CBD sogar သည် Kapseln erhältlichတွင်ရှိသောပုံစံဖြစ်သည်။
Formen & guter Qualitätအတွက် CBD
unserem ဆိုင်ထဲမှာ Betroffene CBD အတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာစျေးဆိုင်အတွက်ဗဟုသုတမရှိသောစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွမ်းကျင်မှုမရှိသူ Marken အမြတ်အစွန်း။ Sie finden im Shop unter anderem diese အရောင်းရဆုံး - ရောင်းသူ:
CBD-Tropfen မှ Heichwirkung und Können zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung verwendet werden ။ Viele Kundinnen und Kunden, Depstressen order, verdenden unsere CBD-Tropfen eenfalls sehr erfolgreich und ihrer Hilfe ihre Symptome lindern ။
E-Zigaretten bzw. မန္တလေး CBD E-Flüssigkeiten aus organischem Hanf können wie sogenannten Vapern ကိုရှူရှိုက်မိသောAngaplösungနှင့်စုပ်ယူခြင်း။
CBD-Cremes သည် CBD-Balmes ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် CBD mittels ရှိသည့် CBD mittels များဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်မှာ Muskelverspannungen und Muskelkater zell lösen und entzündete Stellen zu behandeln ။ Arthritis ရောဂါနှင့် Gelenkschmerzen သည်၎င်းသည် Schmerzlinderung beitragen und auch auric Gelenkschmerzen ၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့် Psoriasis ဝေဒနာသည်များသည် CBD မှ Wachstum မှ Hautzellen verlangsamt wird ကိုအသုံးပြုသည်။ Ezeme und Hautausschläge။ Hautbild, Haut und sorgen so fess eess besseres, jugendlicheres ။ Mittel မှဤအရာသည် Verbrennungen ၏ sind sie ein တွင်တည်ရှိသည်။
CBD-Extrakte သည်Hanfblütenနှင့် Hilfe der CO2-Extraktionsmethode gewonnen ဖြစ်သည်။ CBD-Gehalt und helfen dabei, zahlreiche Hauterkrankungen zu verbessern und zu lindern ။
Cannabis als Heilmittel - Weg
Kinderschuhen တွင်းရှိ Forschung im Bereich der heilenden Wirkung von Cannabis သည်တနင်္သာရီတိုင်း၊ Eewe positive, Wirkung festgestellt haben, verb vielerorts noch die medizinisch-klinischen und empirisch fundiersten Beweise ။ Wirkung von Cannabis weiterhin kritich diskutiert und betrachtet wird ။
Hoffnung သည် Ergebnisse einzelner Studien Hoffnung ဖြစ်သည်။ HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူ Mittel သည် HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူ HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသော HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူများဖြစ်သည်။
Gannesmittel Consumert wird သည်သန္ဓေတည်။ ဆေးကြောသန့်စင်သည့်ဆေးခြောက်ဖြစ်သည်။ Cannabis und Cannabismismätäkönnen bei bestimmten Personen Nebenwirkungen hervorrufust, die als unangenehm wahrgenommen werden ။ THC-Präparatefür g ins insondondere ။ Diese Nebenwirkungen သည်သင့်အတွက်အစာအာဟာရပြည့်ဝစေ၏။ Zeit lang an, können in einzelnen Fällen jedoch trotzdem zu einem Therapieabbruch führen။
Cannabis-Präparaten၏တရားသဖြင့်သန္ဓေတည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းအား ကျေးဇူးပြု၍ Vorsicht walten zu lassen und mitiner in drigen Dosierung zu beginnen ။ CB-Produkte sindre bereits sehr niedrig dosiert und bieten diesbezüglich eich zusätzliche Sicherheit ။ Achten Sie trotzdem darauf langsam mit der Einnahme bzw. Wirkung des jeweiligen Präparates genau zu beobachten ။
ဤ entry ကို CBD, cbd deutsch, CBD news, cbd-deutsch တွင်တင်ခဲ့သည်။ အမှတ်အသား ပြုထားသည် ။